Siyaasada qori isku dhiibka ah ee Somaliland reer Awdal xagay ka soo galaan - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Siyaasada qori isku dhiibka ah ee Somaliland reer Awdal xagay ka soo galaan
Siyaasada qori isku dhiibka ah ee Somaliland reer Awdal xagay ka soo galaan. Waxa markale majaraha maamulka Somaliland gacanta u galay laba jufo ee ISAAQ ee isbahaystey mid ka mida.
Waxaad is waydiin kartaa reer Awdal xagee uga banaan meel sidaa u xidhantey oo reer Awdal badankoodu hadda ku soo baraarugeen inkastoo dabcan ay si xun isku kala dileen dhexdoodu.
Isku dirka reer Awdal ayaa bilowdey markii suldaan Dhawal oo huwanaa magaca guud ee Gadabuursi uu la saftey Axmed Muumin Seed oo looga badiyay Wadani.
Taas ayaa waxay keentay in beelaha Makaahiil ka cadhoodaan kadib markii Suldaan dhan uu la kala saftey dadkii uu matalay. Taas oo keentay in cuqdad Makaahiil la gaarsiiyo beelaha Habarcafaan ha ugu sii qabyaaladeysnaadaan C/llaahi Dheere iyo Suldaan Dhawal laftiisu.
Maxadcase oo awal iyagu tirsan jirey in wixii Samaroon soo galo beelaha Makaahiil qaataan qaasatan Jibriil Yoonis iyo reer Nuur ayaa lacag badan oo Muuse Biixi iyo Saylici keeneen dab ku sii shidey, ayagoo abuuraya Makaahiil nacayb guud.
Codkii gobolka waxa ku guulaystey xisbiga Wadani inkastoo sidaa ay tahay ayna beelaha Makaahiil u wada codeyn xisbiga Wadani, halka deegaanada xeebta ee Saylici gabay beri hore ay si indha la’aana codka u siiyeen.
Doorashadii dhamaatey laakiin xanaftii Suldaan Dhawal bilaabay Muuse Biixi iyo Saylicina dabka ku sii shideen ayaase welli taala. Waxa maanta khasaaraha ugu weyn qabana waa dadkii cuqdada lagu kala dhex beeray.
Inkastoo la sugayo wasiirada Muuse Biixi soo dhisayo oo cadadkeeda la sii yaqaan iyo beelaha ay ka imaanayen ee ISAAQ, waxaad is waydiin kartaa reer Awdal maxaa faaiido ah oo u soo korodhey?
Jawaabtu waa qanjo ka guuroo isla qanjo u guur waayo Saylici oo meel madhana ayaa wata magacii Samaroon waxaan sugnaa waa isla ku tumashada hantida gobolka oo sii korodha.
Samaroon ayaa jooga xilligii ag ugu leeteen siyaasad ahaan.